Honduras: Fampidirana ho an’ireo Blaogy au Honduras – Ampahany faha-3 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 10:03 GMT
”Tongasoa aty Honduras”, sary nalain'ny BurocraciaNeuronal ary nampiasàna ny lisansa Creative Commons
Fitambaran'ny zavatra mahaliana ho an'ireo tanora mpankafy teknolojia ao Honduras ny Los Mercenarios [ES], (mercenario.zoomblog.com), nosoratan'i Alex Cerratosy sy Aroni Dominguez. Ohatra, afaka mamaky fanadihadiana antsipirihany momba ny Transformers ianao, na mihaino lahateny fiderana an'i Mafalda, izay mbola miako ao amin'ny tantara an-tsarin'ny taona 60 tany ho any izay nanaovan'i Quino sary azy. Afaka mianatra ny famoronana ny sarinao Simpsons manokana, mijery ny hatsikana maranitsaina avy amin'ny mpamorona label CD iray, na manatri-maso adin'ireo titan eo amin'ny otaku roa (japoney geek adalana anime be loatra).
Nosoratan'i Irina Orellana ny La vida es Bella [ES] (irina-orellana.blogspot.com) ary afaka mamaky izao ianao ao anatin'ny teniny:
Azonao atao ny mamaky mikasika ny fandraisany anjara amin'ny Diabe ho an'ny Fahamendrehana , ny fitsidihany farany ny renibeny ary ireo fahatsiarovana naterak'izany, ny fibabohan'i Madonna, ary ny fomba fijeriny an'i New Orleans malalany, herintaona taorian'i Katrina.
Nosoratan'i Julia Gomez ny Un Souvenir [ES] (juliagomez.blogspot.com)., izay miezaka ny hahomby amin'ny ”fizarana ny maha-izy azy” amin'ny alalan'ny lahatsoratra toy ny Fialantsiny mba Hisarahana amin'ny Lehilahy, Ny Baikon-tsakafo Tsara Indrindra, ary ny safidiny mampalahelo hitondra akanjo aro orana miloko volomparasy tamin'ny andro avy orana
Manoratra blaogy maro i Miguel Muñoz, mpampianatra tolojia (haifinoana an'andriamanitra) ao amin'ny Oniversite Krisitanina ao Honduras. Hita any anaty lahatsorany ny lohahevitra toy ny rariny ara-tsosialy, fanadihadian'i James Cameron mikasika ny Fasan'i Jesosy, ny fanapahankevitry ny Kaongresy ao Honduras handà visa ho anà mpitarika fivavahana iray (miantso ny tenany ho ”Jesosy Kristy, ilay olona”, na koa hoe ilay ”Fahavalon'i Kristy”.